श्रीमानको कमजोरीले गर्दा बच्चा नजन्मिएर सहमतीमा आफ्नै बुवासँग श्रीमतीई पठाएपछि…! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/श्रीमानको कमजोरीले गर्दा बच्चा नजन्मिएर सहमतीमा आफ्नै बुवासँग श्रीमतीई पठाएपछि…!
सन्तान नजन्मिएकै कारण ति पुरुषले ३ पटक विवाह गरिसकेका थिए । यो उनको चौथो पटकको विवाह थियो । चौथो पटक विवाह गरेकी श्रीमतीबाटपनि सन्तान नभएपछि बल्ल उनको स्वास्थ्य परीक्षण गरियो । त्यसपछि बल्ल थाहा भयो की सन्तान नहुनुको कारण उनी नै रहेछन् । अहिलेसम्मका श्रीमती हैनन् ।
जाहेरी दिने युवतीको पछिल्तर्फबाट लिइएको तस्विर ( स्रोत : आजतक )
घरका सबैसँग त्यसरी बसेमा आफु मानिस सरह जीउन नपाउँने भन्दै उनले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिन् । तर घरपरिवारले दवाव दियो । त्यसपछि त्यो मामला प्रहरीमा पुग्यो । महिलाले उजुरी लिएर प्रहरी समक्ष पुगिन् । अहिले उक्त परिवारका सबै पक्राउ परेका छन् । ( स्रोत : आजतक )